နေ့: အောက်တိုဘာလ22019
2019 နှစ်ပေါင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထဲရေး၏ '' လမ်းသွားလမ်းလာဦးစားပေးယာဉ်အသွားအလာများ Year '' ကြေညာခဲ့သည်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လမ်းသွားလမ်းလာမှဦးစားပေးတဲ့သူတွေကို 100 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်, Kocaeli ၏ဝန်, Kocaeli ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန, Kocaeli ပြည်နယ် Gendarmerie စစ်ဌာနချုပ်နှင့် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Izmit များအတွက်အသွားအလာဒဏ်ငွေ [ပို ... ]
Pakdemirli စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Bekir Bozdag နှင်းလျှောစီး Center ကရှုမြင်ကြသည်။ Pakdemirli, "ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုလဲဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်၏ယခင်နှစ်ကပိတ်ထားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရာသီကာလအတွင်းစစ်ဆင်ရေးသို့ရောက်လိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ Izmir အစ်ဂျီးယန်းဒေသ odemis အတွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်အဓိကနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ် [ပို ... ]
အဆိုပါ 50 ရာခိုင်နှုန်း Applications ကိုထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်စက်ရုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်သီးအစည်းအဝေးရှိပါတယ် Reduce
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စက်မှုစက်ရုပ် Applications ကို 4.0 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးစတင်ခဲ့သည်။ ငါထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှတက် လာ. , အောက်တိုဘာလ, ကြာသပတေးနေ့ညဦးယံအချိန်3မည်, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ၏မျိုးဆက်သစ်ပြ။ နည်းပညာအသစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကအမြဲမြင့်မားတဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့် turnaround အဆမလိုအပ်ပါဘူး။ ပိုင်ဆိုင် [ပို ... ]
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်ရေး Radar နှင့်နယ်စပ်ရေးရာလုံခြုံရေးထိပ်သီး - MRBS, ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးSüleyman Soylu ဝန်ကြီးအမျိုးသားကာကွယ်ရေး Hulusi သူဟာအာကာပါဝင်မှုအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေး, ဝန်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်ပြည်သူပိုင်လှုပ်ရှားမှုများအောက်တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်၏အဖွင့်မှာ [ပို ... ]
Karşıyaka Cigli နောက်ဆုံးဓါတ်ရထားစီမံကိန်းအခြေအနေ
ဧပြီလဖြန့်ချိ Karşıyaka အမိန့်များ extension ကို၏ Streetcar Cigli ဦးတည်ချက်, စီမံကိန်း Izmir ၏ဝန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နှင့် EIA ကို process ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လက်နက်များ၏ extension ကိုများအတွက်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ဝယ်လိုအားပေါ်တွင်လမ်းရထားအင်္ဂတေ Cigli ဦးတည်ချက်ရှိခဲ့သညျ။ စီမံကိန်း [ပို ... ]
ကာကွယ်ရေးစက်မှု, Karabükသံနှင့်သံမဏိကုမ္ပဏီ (Kardemir) မှသမ္မတအိမ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုဖန်ဆင်း .. KARDEMİR INC ။ , ကာကွယ်ရေးစက်မှုကျယ်ပြန့်ပါဝင်မှုနှင့်အတူသမ္မတတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကျင်းပခဲ့သည်။ Kardemir ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရပျ၌ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြည့်ဖို့ယနေ့ [ပို ... ]
Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်: 'Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်လွှဲပြောင်းသင်တန်းများမှာ' '
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဘူတာမှ Haydarpasa Haydarpasa နှင့် Sirkeci စာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ ဖော်ပြချက်; "Haydarpaşaနှင့် Sirkeci နှင့်အခြေအနေနှင့်ဘူတာကွင်းဆင်းအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှလွှဲပြောင်းရန်အများပြည်သူဝယ်လိုအား၏အခြေခံရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီဖို့အသုံးပြု! Haydarpasa [ပို ... ]
Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro ကုန်စည် 1 ဒေါ်လာဘီလျံသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro 1 ဘီလီယံကို Register မှကုန်စည်ဒေါ်လာ: တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor Fatih Altayli နှေး, Haberturk တီဗီရဲ့ "ခေါင်းအထူး" ဟုအဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့။ ဒါ့အပြင်မြို့တော်စီမံကိန်းများကိုများအတွက်နှေးကွေးဖော်ပြနိုင်ငံတော်သမ္မတ 200 နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလုပ်ရပ်များ, [ပို ... ]
Manisa မြူနီစီပယ်MANULAŞပိုင်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းခွဲက Apple Store app ကို Manisakart updated ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Manisa မြူနီစီပယ် App Store မှာကတော့ access ကိုကဒ် app ကိုပေးမိုဘိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် Manisa တည်ရှိသောဘတ်စ်ကားလိုင်းများနှင့် ပတ်သက်. နိုင်ငံသားများအားဖြင့်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုကန့်သတ် [ပို ... ]
ID ကိုကတ်3အခမဲ့နေ့နှင့်အတူ Elkart ပိုင်ဆိုင်မှု၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ကျောင်းသားများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦများတွင် Elkart အဖြစ် Konya အတွက်စာရင်းသွင်းတက္ကသိုလ်များမှသူတို့၏ကျောင်းသားဝိသေသလက္ခဏာကတ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်3ရက်ပေါင်းပထမဦးဆုံးအအသုံးပြုမှုကိုအပြီးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး complimentary အသုံးပြုမှုကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်; Selcuk တက္ကသိုလ်, Necmettin [ပို ... ]
Karamursel Kocaeli, Gölcükနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသုံးပြုမှုကိုလမ်း Salim လမ်းDervişoğluဆဲလ်မှBaşiskeleခရိုင်နဲ့ D-100 အခြားရွေးချယ်စရာမှဦးဆောင်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့်အသွားအလာကိုပိုအရည်စေရန် pauses ။ ပထမဦးဆုံးအအဝန်းရေးစင်တာကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ပါပဲ [ပို ... ]
Kocaeli တက္ကသိုလ်ခရိုင်နှင့်အတူ 12 ulaşımparkထံမှလွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အတူတူရကီရဲ့အငယ်ဆုံးရေတပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုအဘယျသို့ '' က၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများ, Kocaeli တက္ကသိုလ် (ရေနံပေါင်းတင်) ၏ကွဲပြားခြားနားသောခရိုင်ကနေစုစုပေါင်း 12 ulaşımpark။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, 336 နှင့်အတူ Kocaeli ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေး။ ပညာရေးရာသီအတွက်မြို့တော်, 2019-2020 [ပို ... ]
ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံများတွင်အခြားရည်ရွယ်ချက်များစွန့်ပစ်လျက်, နိမ့်ကြမ်းပြင်ပြီးစီးခဲ့ပြီအတှကျအသုံးပွုဒေသများ၏ IMM Esenler ဖကျြဆီးခွငျးအားဖွငျ့အမွေဆက်ခံ။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), ဇူလိုင်လ9စက်တင်ဘာလ 15 ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပူပဒေသများအထိသန့်ရှင်းရေး, အဘတ်စ်ကားဘူတာ (Esenler) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ အောက်ပိုင်းအဆင့်အထိဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ [ပို ... ]
IMM, Metrobus နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကြေညာချက်များတောင်းပန်
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် Altunizade Metrobus ရပ်နားဖြင့်ကြေညာချက်တို့အတွက်ကြောင့်တစ်ဦးတောင်းပန်ဘို့တောင်းစား၏အစောပိုင်းနံနက်နာရီအတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ မြေအောက်တက်, ကြေညာချက်အခွအေနအသီးအသီးမြေအောက်ရထားများအတွက်Söğütlüçeşmeအချိန်ပြင်ပေးဖို့မနက်ဖြန်ကနေအာရုံစူးစိုက်မှုအချိန်စေသော [ပို ... ]
IETT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, နိုင်ငံတကာကာယကံရှင်များနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးအစ္စတန်ဘူလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့မောင်းသူမဲ့ကားစီမံကိန်းကို။ အခြားရွေးချယ်စရာစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များတစ်ဦးမှလှည့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), မြို့ပြဘဝနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရာ IETT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏လက်အောက်ခံ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မခံတဲ့, [ပို ... ]
စက်ဘီးများအသုံးပြုမှုအတွက် Erkenez လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းသားများကိုပေးသောရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်စက်ဘီး၏အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ် Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ ကလေးများကျောင်းကပညာပေးဖို့သူတို့ရဲ့လမ်း pedaled ။ ဖြန့်ချိရာကျန်းမာမြို့ကြီးများအစည်းအရုံး, 'ပေါ်လာကြ, ကျောင်းကလေးတွေစက်ဘီး' 'ကမ်ပိန်း 23-27 စက်တင်ဘာလဖုံးလွှမ်း [ပို ... ]
နှစ်ခုန်ထမ်းနှစ်က 2009 ဖို့အခွင့်အာဏာပြီးနောက်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) တရားစွဲခဲ့။ ဟုဆိုကာငါးခရီးသည်နှင့်၎င်းတို့၏တာဝန်ပျောက်ပျက်သောရထားချုံးချုံးကျသွားတယ်အတွက်လျစ်လျူရှုသည့် 10 Bozoyuk အတွက် အဆိုပါ Assize တရားရုံးအတွင်းဖြစ်ပွားနေသောရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်Bozüyük, TCDD [ပို ... ]
RayHaber 02.10.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Durak Bucak စခန်းများအကြားHanlı-Çetinkayaလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမြေပြိုတောင်ပြိုမှုအဆင့်မြင့်စက်ရုံများတပ်ဆင်ခြင်းအလားတူမီးရထားသတင်းများနှင့်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအခြားသတင်းများRayHaber 25.01.2019 တင်ဒါသတင်းလွှာ 25 / 01 / 2019 ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင် 25.01.2019 အတွက်တင်ဒါမှတ်တမ်းမရှိပါ။RayHaber 04.02.2019 [ပို ... ]
လွန် Ankarakart6သန်းအရေအတွက်
ထိုမြို့တော် Ankarakart အားလုံးကိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အလုပ်အရေအတွက်6သန်းကျော်သွားပြီ။ က Ankarakart တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်မျိုးစိတ်များ၏အရေအတွက်အတိုင်းမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းစာအုပ်ငယ်၏ 2020-2024 အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှု၌တည်၏။ ဇွန်လအတွက်တူရကီအတွက် data တွေကိုအတ္တအဆိုအရ 306သန်းစုစုပေါင်း [ပို ... ]
Sırmalıထံမှ Edremit Canakkale အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်းမကြီးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်
Edremit Canakkale D550-06 လမ်းအသွားအလာ Edremit အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီလျှို့ဝှက်ချက်များအစည်းအဝေးတွင်ဖျော်ဖြေဖြစ်လျှင်, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကျော်သဘာပတိအဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်မတော်တဆမှုများကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့။ Edremit Edremit ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအလီသောငါတို့အဆင်ပြေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအသွားအလာစီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန် [ပို ... ]